rhinitis oyingozi noma coryza elula - kuyinto inqubo oyingozi noma iguliswa ukuvuvukala kule mucosa we ingaphakathi acinene.
Rhinitis kungaba isifo ezimele, kodwa futhi kube inkinga izifo oyingozi noma ezingamahlalakhona sokuvuvukala zokuphefumula omsakazo amagciwane. Ngaphezu kwalokho, rhinitis oyingozi kungenzeka by ukushukuma mechanical noma ukuchayeka ezintweni ezithile zamakhemikhali. Rhinitis cishe njalo zamazwe amabili.
ukubonakaliswa Clinical lesi sifo
Ekuqaleni isifo umuntu ungase uzizwe ukungakhululeki okuncane, umphimbo obuhlungu, ukulunywa amavesi acinene, amehlo slezenie. Kwesinye isikhathi ekukhathaza ukukhwehlela, izwi iba Husky. Lezi zimpawu zivame senziwa zizwa amakhaza. Ngaphezu kwalokho, kukhona luningi acinene mucosal gumbi, olfaction encishisiwe. Lapho isimo sibe sibi nakakhulu rhinitis, khulula kungenzeka doped kuvuze ubomvu noma igazi streaks kuphakama ukuminyana acinene. Igazi livela njalo uthule ekhaleni lakho kahle capillary ubuqotho. rhinitis olunamandla ungase uqhubeke i ipheshana ecashile zokuphefumula bese ukuthuthukisa tracheitis noma ukucinana kwemigudu yokuphefumula. Ngokuvamile inkinga rhinitis yisishiso tube sokuzwa noma sinuses. On luhlolo, le mucosa kwekhala kanye hyperemic hydropic. Ngo isifo ayinzima ngokuvamile kuyaxazululeka isikhathi esiyizinsuku eziyisikhombisa kuya kweziyishumi.
Rhinitis ezinganeni kwenzeka njalo like nasopharyngitis, futhi ngokuvamile kakhulu ukutheleleka ingaphansi, kuze nesenzakalo Ukucinana kwemigudu yomoya emaphashini noma ngisho ne-pneumonia. Izenzo sifo ingane eliqhakaze ngempela: ekhaleni stuffy, kukhona ukudakwa, kungase kwandise izinga lokushisa. Uma ingane ibele, le oncelayo kunzima ngenxa yokugcwala acinene. Uba Moody, ukubuyisa, ukuphefumula umlomo, yingakho ezomile lwamafinyila.
Coryza lula ukuyithola. Examination futhi isabelo ukwelashwa sasihilela Udokotela wezindlebe noma udokotela. Kuphuma uketshezi ekhaleni, ukuminyana, edema kanye hyperemia we ulwelwesi lwamafinyila kukhona nenqubo main e uphethwe.
Ukwelashwa rhinitis oyingozi
Futhi abadala, futhi izingane nge lokushisa lomzimba isigqugquzeli sikhombisa ukuphumula futhi embhedeni ukuphumula. Ekuqaleni lesi sifo kungase kudambise isimo kukuphazamise izinqubo: unyawo efudumele zokugeza, lwesinaphi plasters phezu kwesifuba, ephefumula noma ultraviolet ngemisebe ikhala. Lapho ukucinana acinene linqume acinene vasoconstrictor izidakamizwa (Sanorin, Nazol, Naphazoline, Rinostop nabanye). Desirably, le mucosa acinene ukuze ome out emva amaconsi kudingeka ukuthi iphathe acinene izindima uwoyela (zamapetshisi, umnqumo, petrolatum) noma ukusebenzisa izidakamizwa "Pinosol", okuyinto okulungiselelwe ngesisekelo amafutha abalulekile amafutha fir. Vasoconstrictor izidakamizwa akutuseki ukusebenzisa amalanga angaphezulu kwamahlanu, njengoba ukusetshenziswa kwazo esikhathini eside esizayo kungaholela ekubeni umlutha wezithombe, futhi unomphela - yoma we mucosa acinene. Lapho ukubusa yezinkinga ukusabalala kwesifo ngezansi, kubalulekile yokusebenzisa ama-antibiotic. Ngasikhathi sinye, kuyinto efiselekayo ukuqhuba ane-alikhali soda ephefumula izidakamizwa elwa namagciwane. Ukulungisa isixazululo soda esithathwayo ithisipuni elilodwa baking soda futhi ziyoncibilika 0.5 litre amanzi abilisiwe afudumele anosawoti. Lolu hlelo imuncwe ngokusebenzisa i nebulizer ultrasonic imizuzu emihlanu. Le nqubo kuyinto efiselekayo lokufeza izikhathi eziyisithupha ngosuku. Soda isixazululo ane-alikhali ayindawo okungekuhle kwezilwanyana ezincane pathogenic futhi kanyekanye hydrates le mucosa acinene.
Ukwelashwa rhinitis ezinganeni zihlanganisa imisebenzi efanayo ngezilinganiso elihambisana isisindo futhi sidala kangakanani ingane. Umzimba ongezwani nezinto rhinitis omsakazo kudinga ukusebenzisa ama-antihistamine kanye ukuchayeka nokukhawulela kuya allergen.
Ummbila onyaweni: izimbangela nokususwa
Imilenze inkwantshu: izimbangela kanye usizo kuhlasela
Emaphilisini ekhanda entanyeni: Izimbangela Nezingozi Izimpawu
Korsakoff Syndrome - izimpawu nezimbangela
Polyneuropathy: Ukwelashwa, Izimpawu, Izimbangela
Vepsskaya unodoli: indlela yokwenza njengentelezi ngezandla zabo?
Kanjani ukuqala mechanical iwashi Amathiphu
Loluhlelo tariff ngaphandle Imali yenyanga (MTS): yini ukukhetha? Tariff eshibhe kungekho imali nyangazonke MTS
Sofa olele ekhishini - kakhulu ezindlini ezincane
Izinkomba ukusetshenziswa futhi impendulo, "Pantogam"
Bathola izingane ngokuhlinzwa e Israyeli
Ukuhlanganisa kwemali ngazimbili nomunye
Quince Chinese: izakhiwo ewusizo, zokupheka